AGROTECHNICS BEERAHA LOOFAH: BEERASHADA IYO DARYEELKA - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo koro loofah ka soo abuur ah: Faa'iidooyinka Faa'iidooyinka
Waa maxay lyuffa, wax yar ka yaqaan, iyo xataa ka badan oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo codsiyada. Laakiin kuwa doonaya in ay ku raaxaystaan ​​of qalafsan, this warshad cajiib ah oo ka soo qoyska bocorka waa si fudud loo baahan yahay.
Qarsoodigiisu maaha wax badan oo ku saabsan qurxinta sida midnimada midhaha. Waxay diyaariyaan suxuunta dhadhanka leh iyo dhar dhaqidda dabiiciga ah. Waxaadna ku sameyn kartaa arrintan oo dhan guriga. Aan isku dayno inaan ogaano sida loofaha u kori karo abuurka, waxa ku jira daryeelka iyo waxa isticmaalka.
Botanistu waxay u kala soocaan Luffa (Luffa) oo ah caleenta geed canab ah. Dhulka tropics ee Aasiyaanka, waxay kor u qaadeysaa illaa shan mitir oo dherer ah, oo ah jawi cakiran jawi cimilada, koritaanka dhirta ayaa aad u xaddidan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu gartaa xilli sii kordhaya.
Sidaas awgeed, Fiisooyinka ayaa ku talinaya beerista dalagyada khafiifka ah si ay u siiyaan door bidaan habka seedling. Sidaa darteed, goor hore, wax soo saarku waa mid dhab ah.
Ma taqaanaa? Iyada oo ku xiran kala duwanaanta kala duwan, miro-khudradda waxaa loo isticmaalaa karinta iyo warshadaha kala duwan. Tusaale ahaan, laga bilaabo saliidda, oo laga helo tiro badan oo ka mid ah miraha qudaarta, shidaalka ayaa la soo saaraa, qashinka waxaa loo isticmaalaa saabuunta samaynta, jeexjeexyada ayaa loo isticmaalaa sidii filtarro lagu nadiifiyo biyaha warshadaha.
Waqtiga ugu fiican ee beeridda
Wixii hore ee miraha, la siiyo maqaarka adag, adag oo ku on miraha, biqilka ee loofah waa inuu bilaabo dhexe ee jiilaalka. Horeba toddobaadkii koowaad ee February, waxaad diyaarin kartaa abuurka ah ee beereed, iyo sida ugu dhakhsaha badan sprouts yar oo iyaga ka soo, waa inaad isla markiiba dhirta.
Celcelis ahaan, mudadani waxay socotaa wax ka badan laba toddobaad. Laakiin qaar ka mid ah mulkiilayaasha "dhar-dhaqashada sii kordhaya" waxay la wadaagaan waayo-aragnimadooda abuurka abuurka bisha Abriil. Xaqiiqdii, qaabkan, goosashada waxay noqon doontaa waqti dambe. Si kastaba ha noqotee, qorshee dhammaan shaqada oo tixraacaya jadwalka kaluunka.
Awoodaha iyo ciidda beeritaanka
Asalka casriga ah ee Asiya ayaa ka soo baxa ciidda bocorka iyo shuruudaha laga beerto qoyska. Waxaa soo baxday in dhaqanku uusan jecelnayn bedelka qaaxada, wuxuu jecel yahay oo keliya dhul bacrimiya oo dabacsan.
Khubarada waxay kugula talinayaan in ay biqilaan warshad dhir leh oo ku jirta koobabka caaga ah. Laakiin marka xulashada iyaga waa in ay tixgeliyaan mugga ah geedo mustaqbalka, waa in la isticmaalo weelasha leh dhexroor ah ilaa 7 cm.
Waa muhiim! Luffu laguma beerin sariiro. Baahida hal qoys, laba dhir ayaa ku filan.
Ciidda loogu talagalay geedo waxaa loo diyaariyey qadar siman oo ah dhul caleen, ciid webiga iyo lakabyada sare ee peat. Laakiin hostes badan ayaa tixgelinaya habkan oo wax yar ka dib oo la taliyaa tiknoolajiyad dheeraad ah.
Waxay ka kooban tahay isticmaalka kiniinnada peat ee la iibsaday ama dheriyo. Luffa, dhirta noocaan oo kale ah waxay ku siin doontaa nafaqada lagama maarmaanka ah illaa qalliinka geedo si meel joogto ah, marka laga reebo, sprouts iyo xididada aan lagu dhaawacin habka.
Si ay u noqoto isbuunyo ka soo baxa loofah, miraha waa in si taxadar leh loo diyaariyaa beeridda. Ka dib oo dhan, oo u muuqday jawi aan wanaagsaneyn, ma siin karaan dhammaan caleemaha. Waxa ugu horeeya ee Faa'idooyinku waxay ku talinayaan in ay qoyaan abuurka dhawr maalmood.
Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa xalka daciifka ah ee kiriimiga ah, casiirka aloe ama biyo diirran oo diiran oo leh kiciye kobcin. Emistim, Kornevin, Ecosil iyo daroogooyinka kale waxay ku haboon yihiin sida ugu danbaysa.
Waa muhiim! Geedo badan oo luffa ah ayaa si xanuun leh ugu gudubta beerka si meel joogto ah. Tani waa sababta oo ah in lagu dhejiyo dhirta, sprouts ku xanuunsan la'aanta nafaqooyin, iyo marka ay joogaan goobta, ayadoo ay ugu wacan tahay tabar-dari la'aan ma ayan la qabsan karin xaalado cusub.
Wixii qallajin, miraha waxaa lagu dhejiyaa faashad ama dhar wadaag iyo xidhxidhnaa. Kadibna waxaa lagu rusheeyaa dareer diirran oo diirran oo u dhaw meel u dhow batrool ama qalab kale oo kululaynta. Ka dib 7-14 maalmood miraha ka daadi doona.
Marka lagu beerayo loofah on geedo, go'aamiso mudada ah candhuufta. Marka ay diyaar yihiin, waxaad bilaabi kartaa beerashada. Haddii aad qaadatay kiniinno peat ah ujeeddooyinkan, waxay u baahan doonaan in si fiican loo qasi karo ka hor inta aan bararka buuxa.
Ka dibna ku beer be abuurka si qoto dheer ah 2 cm. Koobka ugu sarreeya ee kiniinka ayaa lagu daboolay baakadka isku midka ah si loo abuuro saameyno aqalka dhirta lagu koriyo
Haddii aad qorsheyneysid inaad buuxisid taangiyada adoo isku dardaraya ciidda isku dhafan, beeritaanka waxaa loo sameeyaa si la mid ah sida ku jirta qaybtii hore. Marka la dhamaystiro shaqada, hubi inaad dusha ku daboosho filim ama dabool caag ah.
Waxaa lagu talinayaa in la dhigo "aqalka dhirta lagu koriyo" on windowsill koonfurta, halkaas oo waxaa jira had iyo jeer kulaylka iyo badan oo iftiin ah. Iska ilaali qorshayaasha dhow iyo meelo furan. Under shuruudaha wanaagsan, geedo waa in muuqan in 3-4 maalmood.
Waa muhiim! Haddii aadan furi karin miraha wiqiga maalin kasta ee hawo qaadashada, ciidda koobka waa la dabooli doonaa caaryada.
Luffa beerashada iyo daryeelka waxay u egtahay qajaarka. Pumpkin qalaad loogu talagalay horumarinta dheeraad ah waxay u baahan tahay qoyaan. Laakiin waxa ugu muhiimsan - ha ka badin.
Geedo yar yar waa in la waraabiyaa kaliya marka lakabka sare ee substrate dhoobo koobka. Marnaba ha u keenin xaalad jajab ah.
Heerkulka qolka oo loofah koraayo waa in uu ahaado ugu yaraan 20 digrii. Liana si dhakhso ah ayey u socotaa koritaanka, xaaladaha qolka waxaa lagu beeraa illaa May.
Loo kobciyo caleemaha waa in la adkaado, haddii kale xaalado aad u daran waxay u dhiman karaan. Dhibaatada ugu horreysa waa suurta gal inay ku qabato maalin qorrax leh oo qorrax leh maalintii 4 galabnimo. Inta lagu jiro muddadaa, hawada dibada ayaa si fiican u kululaatay, dhirtuna ma heli doonto walaac.
Waxaa lagugula talinayaa in aad geedka ka baxdo maalin walba. Haddii aad qorsheyneyso inaad ku beerto luffa at aqal, iyo koraan geedo in guri dabaq ah, dhig dheryaha on balakoonka furan ama daaqad. In hawada u furan, geedo leh waqti leh laga tegi karaa 5-6 saacadood. Kaliya waa in la sameeyaa si tartiib tartiib ah.
Ma taqaanaa? In midhaha iyo caleenta loofah, fitamiin A waa hal jeer iyo badh ka sarreysa karootada.
Geedo beerto in dhul furan
Beerta moydodyr ee heer kulul ayaa aad u xasaasi u ah isbeddelka ku yimaada ciidda, cimilada iyo daryeelka. Aan u falanqayno khaladaadka ugu weyn ee dadka ku nool xaafadda oo ogow sida loo beero dhererka saxda ah.
Shuruudaha ugu fiican ee degitaanka
Marka caleen shanaad ay ku dhacdo liana, waa wakhti ay ku beddesho geedo si ay u furto dhulka. Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo heerkulka maalinta ka baxsan, maadaama dhaqanka dabiiciga ah ee gebi ahaanba aan loo dhigin qabowga.
Waa lagama maarmaan in heerkulbeeggu kor u kaco 15 ° C, iyo cimilada diiran ee cimiladu waxay ku taallaa dayrka. Guud ahaan, qorsheyso inaad bedesho wax aan ka horeyn May.
Doorashada meel si ay u koraan
Waxaa habboon in la eego horay loogu sii wadi karo goobta loo yaqaan 'loofah, xitaa marka geedo ay ku qanacsan yihiin kulaylka daaqadahaaga. Dhammaanba maxaa yeelay waxaa jiri doona hawlo diyaargarow ah ka hor inta aadan ku tallaalin.
Kaliya shucaac oo laga ilaaliyo dabaylaha woqooyiga iyo aagagga loo yaqaan 'drafts' ayaa ku farxi kara liyaafi kulul. Waa suurad wacan in aysan jirin geedo u dhow, sababtoo ah, iyaga oo koraya, geedka canabka ah ee miro, natiijada, waxay u jihaystaan ​​saxda ah on jir ah.
Waa muhiim! Luffa ma kori doono gobollada leh xagaaga roobab qabow.
Carrada waxaa loo baahan yahay qoyaan dhexdhexaad ah, oo lagu kobciyo nafaqooyinka, dabiiciga, carrada madow ama dabacsan ciidda. Haddii aysan jirin wax, waa inaad saxeysaa meesha la doortay.
Marka aad dooranayso meel loogu talagalay geedo quudin, sidoo kale waa qiimo badan in la tixgeliyo kuwii horay u soo maray iyo dalagyada sii kordhaya. Luffa laguma talin in la xidho ka dib qaraha iyo bocorka - waxay leeyihiin baahi loo qabo cunto iyo dareen isku mid ah maadooyinka cudurka pathogenic.
Diyaarinta goobta ka hor beerashada
Dhammaan shaqada u diyaargarowga goobta la doortay waxay ka kooban tahay si qoto dheer u qodaya ciidda, bakeerinta, iyo, haddii loo baahdo, hagaajinta, iyo sidoo kale dhisidda taageero canabka ah. Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad gashid goobta oo aad iska hubiso fal-celinta pH.
Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa khalabka miiska, oo ku rusheeysa dhoobo dhulka ah oo ka kooban 20 sentimitir. Niyadjab iyo xumbo waxay muujinayaan bay'ad alkalineed.
Substrate-ka qafiifka ah waxaa lagu hagaajiyaa burka dolomite, boorka cement ama lime caadiga ah. Laga bilaabo 150 illaa 300 g oo ah walax ayaa lagu dabaqaa mitirka labajibbaaran.
Ma taqaanaa? Dharbooyinka luffa waxaa lagu qiimeeyaa ma aha oo keliya dabiiciga, laakiin sidoo kale in la nadiifiyo maqaarka unugyada dhimashada iyo duugista simaka.
Iyadoo aan loo eegin sifooyinka ciidda, aagga diyaarka ah waxaa la bacrimiyay walxo nafaqo leh oo ah 1 baaldi oo ah humus (waxaa lagu bedeli karaa compost), 2.5 qaado oo ah superphosphate oo qaata 1 qaado oo ah HOL iyo potassium sulfate. Haddii dhulka uu yahay bac, waxaad u baahan tahay inaad ku darto humus ka badan. On carradu culus, ciid webiga, hardwood iyo compost loo baahan doonaa. Marka aad dhulka la wadaagto dhammaan shaqada, waxaad bilaabi kartaa inaad ku rakibto trellis ama taageero kale. Tani waa muhiim inaad hadda samayso, sababtoo ah isla markiiba ka dib markaad dhashid dhaqanka ayaa u baahan doona in la xiro.
Geedo beerto: nidaam iyo qoto dheer
Waxaad horey u ogtahay in lyuffa yahay liana iyo koritaanka xaaladaha wanaagsan. In cimiladeena, ay afkoda ku gaadhi kartaa 7 mitir dhererka.
Sidaa darteed, marka laga beerto waa muhiim inaad ilaaliso masaafada u dhexaysa dhirta ku dhow. Udubiyeyaashu waxay ku talinayaan dib u gurashada illaa 1 m.
Soo saarista waxaa lagu fuliyaa ceelasha, qoto dheer iyo ballacadiisu waxay la mid tahay xayndaabka maqaarka. Qeybta hoose ku shub isku dar ah qaybaha siman ee humus ama compost iyo geedo xidid. Isla mar ahaantaana, waa lagama maarmaan in si taxaddar leh loo gooyo galaaska oo iyaga uga soo saaro kubad dhoobo leh jeermis.
Tani way fududahay in la sameeyo tan kiiska kiniiniga peat. Waxaa lagu talinayaa in lagu aaso biqilka caleenta cotyledon.
Waa muhiim! Iyadoo aan dharka caadiga ah, geedka canabka ah ayaa lumin doona saameynta qurxinta. Caleenta wuxuu noqonayaa ciriiri la'aan.
Sida loo daryeelo loofah
Isbaarada beerta, sida qajaarka, waxay u baahan tahay qoyaan dhexdhexaad ah, kuleyl badan, quudin joogto ah, taageerid la isku halleyn karo iyo hagaajinta baadiyaha. Waanu fahmi doonaa waxkasta si isku mid ah.
Waa mid xiiso leh in lagu barto beerista noocyada qalaad sida guriga: medlar, strelitzia, okra, zizifus
Luffa wuxuu jecel yahay hawada qoyan iyo ciidda. Sidaa darteed, waa suurad wacan in laga waraabiyo tuubada beerta ama qalabka roobka. Tirada waraabka dhirta dhirta waxay kuxirantahay dabeecadda carrada iyo cimilada. Waxaa muhiim ah in lakabka sare ee carrada ahaa wax yar qoyan, laakiin aan qoyan. Isla markiiba ka dib transplantation, geedo lagu waraabin karaa toddobaadkii hal mar, iyo marka goosashada geedka canabkiinna, daaweynta biyaha kordhiyo.
Mustaqbalka, diirada saar xaaladda ceelasha pristvolny. Beeraleyda khibrad leh waxay ku talinayaan in ay daaqsiyaan ilaa saddex jeer toddobaad kasta laga bilaabo Juun ilaa tobanka sano ee labaad ee bisha Sebtembar. Ka dibna waraabinta waxaa la yareeyey si loo yareeyo xilli sii kordhaya. Sida laga soo xigtay khubaro, khiyaamadani waxay wax ku kordhinaysaa miro-gaabnimada ugu dhakhsaha badan.
Ha ku shubin biyo badan. Nidaamka asaasiga ah ee exot wuxuu ku yaalaa dusha, sida squash, sidaas darteed waxay noqon doontaa ku filan oo qoyaan 15-20 cm.
Waa muhiim! Marka heerkulka habeenku uu ku dhaco 5 darajo Celsius, dhammaan miraha laga yaabo inay u baahan yihiin in laga saaro. Haddii kale, sababtoo ah jabinta anthracnose, waxay noqon doonaan kuwo aan ku habooneyn isticmaalka.
Xilliga xagaaga dhirta waxay u baahan tahay shan bacrimiyayaal. Waxay bil walba ku qaataan marar badan laba jeer. Sida caadiga ah, waxay la macaamilaan habka asaasiga ah, waraabinta geedaha kala diri 1 litir oo biyo ah 1 kg oo ah mullein iyo 250 g oo ah ash alwaax.
Bedel ahaan, waxaad isticmaali kartaa faleebo cawska cagaaran ama digada digaag, lagu darsaday saamiga 10: 1. Sidoo kale xalka yar ee nitrogen-ku habboon laba qaado oo ah HOL iyo baaldi biyo ah.
Qallajinta iyo qaabaynta baadiyaha
Luffa waxay u baahan tahay dhexgal joogto ah geedi socodka horumarkiisa. Si ay midhaha si siman u sameeyaan, waxaa lagu talinayaa in laga saaro geeddi socodka dhinaca iyo in la xoqo barta dhexe ee 4 m.
Sidoo kale, laga bilaabo bartamihii Juunyo, ugxan-jabka xad-dhaafka ah waa in laga saaraa. Khubarada waxay kugula talinayaan in ay ka baxaan 5-8 Zelentsov, si aysan dadka kale u dhicin dushooda.
Haddii midhihii ay u muuqdaan kuwo isbedelaya oo ay bilaabaan inay ka sii darayaan geedka canabka ah, u fiirso shuruudaha koritaankooda. Marka hore, barafka sii kordhaya ayaa u baahan in si joogta ah loogu xiro taageerada. Marka labaad, waxaa muhiim ah in la toosiyo geedka canabka ah si ay ugxan-yadu si xor ah uga soo baxdo trellis. Kaliya markaa khudaarta wey weynaan doonaan xittaa.
Ma taqaanaa? Miro khudradda bislaaday ayaa la kaydin karaa dhawr sano.
Khudaarta cagaaran ee karinta ayaa laga saarayaa geedcanab, iyada oo aan sugin bisaylkooda. Kadibna foormaatka miro ayaa ah jilicsan oo raaxo leh dhadhanka. Haddii aad seegto waqtiga nadiifinta, ha isku dayin suxuunta ka soo baxa loofah. Hoyga khibraduhu waxay sameeyaan saqafyada la qaboojiyey xilliga jiilaalka.
Haddii aad qorsheyneysid inaad samayso dhar dhaqasho, ka saar khudaarta bisil oo keliya. Oo iyaga waxaa laga siin doonaa in yar oo xayawaanka ku xidhan, Waqti ka dib, waxay dhuuqdaa oo si fudud u foorarsataa, adigoo ka tegaya faashado qalalan. Waxaad karin kartaa khudaarta karkaraya 20 daqiiqo si aad u dhaqaajiso jarida cayayaanka. Gudaha waxaa lagu dhaqaa biyo diirran oo la qalajiyey.
Dharkan dharka ah ayaa kugu dhaafi doona ugu badnaan 6 bilood. Wixii abuur ah, miro khudradda ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Waxay ururiyaan Oktoobar. A calaamad muujinaysa abuurka la tufay ayaa ah midda gudaha ee gudaha.
Cilmi-baadhayaashu waxay ku kala duwan yihiin kaliya konton kala duwan ee loofah, laakiin noocyada kala duwan ee kaliya ostrorebristaya iyo noocyada cylindrical waxaa lagu soo bandhigay dhaqan, tan iyo noocyada kale aad u yar.
Luffa fiiqan (Luffa acutangula) waa liana dabiici ah oo leh miraha yar yar illaa 35 cm oo dherer ah. Khudaarta waxaa lagu kala soocaa qaab isku xidhan oo leh geeso cad iyo maqaar sare. Si aad u jeexdid waa wax aan macquul ahayn. Noocyada waxaa lagu beeray badanaa ujeedo nafaqo leh, oo leh cagaarka yar yar ee u soo jeeda jikada.
Ma taqaanaa? Sannado badan, ka hor inta aan la gaadhin qalabka synthetic, miraha loofah ayaa loo isticmaalay sidii shidaal iyo filtarka hawada.
Tilmaamaha of geedcanabkan waa in ay Bloom kaliya ee habeenkii, siday u kala horreeyaan, iyo pollinated by Baalalladii habeenkii. Beeralayda waxay xusuusnaadaan in noocyada ay yihiin kuwo aan qabyo ahayn, si sahlan u dhigma ciidda oo aad u adkaysata cudurada fangaska.
Cylindrical luffa Waxaa lagu beeray inta badan diyaarinta dhar wasakh ah. Nolol maalmeedka waxaa loo yaqaan 'uterine'. Kala duwan ayaa leh miraha waaweyn leh dherer ahaan illaa 70 cm oo leh jilicsan, saxaro caano leh iyo maqaar khafiif ah oo si sahlan u dillaacaya.
Codsiga iyo isticmaalka
Waxaad ka hadli kartaa faa'iidooyinka luffa mudo dheer, sababtoo ah saynisyahanadu maanta waxba kama ogaan tayada waxyeellada geedka.
Hase yeeshee, waxaa mar horeba la xaqiijiyay in dhar dhaqidda dabiiciga ah ee laga sameeyay lebbiska khudradda cagaaran ay kiciyaan wareegga dhiigga, ma keenaan xasaasiyado xasaasiyadeed iyo maqaarka maqaarka, waxay leeyihiin saameyn dheeri ah oo lenfali ah waxayna gacan ka geystaan ​​xalinta dhibaatooyinka cellulite iyo calaamadaha fidsan.
Ma taqaanaa? Shiinaha, Thailand, Japan, America, Central Asia, Indonesia, India ayaa ah kuwa ugu ballaaran ee soo saarka dunida.
Khubarada, naqshadeeyayaasha iyo dhakhtarrada ayaa si fiican ugu hadlaya khudaarta cajiibka ah. Tusaale ahaan, kii ugu horreeyey wuxuu bartay inuu ka shaqeeyo culuumta khudradda culus ee laga sameeyo hilibka jilicsan, ubaxa iyo caleenta.
Dhinaca kale waxa uu sheegay in suurtogalnimada in warshadda ku jirta bulshada ay weli tahay mid la qiimeeyo. Laga soo bilaabo fiilooyinka midhaha, waxaad samayn kartaa marxalado gaar ah, laydhka saqafka, ubaxyada, shaashadaha, iyo xitaa qaar ka mid ah alaabta guriga.
Wixii dad badan oo ku saabsan wax badan oo ku saabsan daaqada, luffa waa abuurka dhabta ah ee Hooyada. Waxay u eg tahay geedka canabka ah, gacmihiisu waa inay noqdaan kuwo aan la filayn, laakiin aan sheybaarka aan la shaacin.
Dhakhaatiirtu waxay ka hadlaan sifooyinka bogsashada ee dhaqanka. Casiirkeeda waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo xinjirowga, dhibaatada maqaarka, dhiig yari, cudurada naaska iyo sanbabada. Waxa kale oo lagu xusay jeermiska, tonic iyo saameynta immunostimulating of loofah. Faa'iidooyinka geedka iyo waxay yiraahdaan farmashiyayaasha. On sale waxaad ka heli kartaa daroogo badan oo ku salaysan saarista iyo saliidaha of this qalaad.
Sida iska cad, waxay ka hadli doonaan luffa. Dhanka kale, yaynaan hoosta ka eegin nooca dabiiciga ah ee na siiyay quruxda, raaxada iyo jidhka. Raadinta dhammaan talooyinka kor ku xusan, waxaad heli doontaa goosashada wanaagsan ee dhaqanka qalaad iyo hubso in ay tahay mid gaar ah.